के प्रेम गित – ३ मा राजेश प्रदीपका बा बन्लान् ?? - Experience Best News from Nepal
झण्डैं २ घण्टाको भेटघाटको अन्तिममा अभिनेता हमालले ग्रिन सिंग्नल दिएका छन् । उनको यो सिंग्नलसँगै निर्माण टिमले पुराना लोकप्रिय अभिनेता हमाललाई भित्राएर चलचित्रलाई थप ब्लकवस्टर बनाउने सोँचमा छ ।
प्रेमगीत, प्रेमगीत–२ नेपाली चलचित्र उद्योगका सर्वाधिक मन पराइएका चलचित्र हुन् । प्रेम गीत–३ को मौखिक रुपमा कथा मन पराएको हमालले बताएका छन् । भेटमा कथा र पारिश्रमिकमा चित्त बुझेको खण्डमा हमालले काम गर्न सक्ने संकेत दिए । हमालको चाहना के हो भने अब आउने चलचित्र कुनैपनि हालतमा सफल हुनुपर्छ । पारिश्रमिक भन्दा पनि कथा बलियो भएको खण्डमा हमालले काम गर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ ।
चलचित्र बागमती र सकुन्तलापछि अभिनेता हमालले अन्य प्रोजेक्टमा काम गरेका छैनन । उक्त चलचित्र छायाँकनका बेलामा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भन्दा भिन्न चलचित्र बनेपनि हमाल केहि बर्ष चलचित्रमा काम नगर्ने भन्दै बसेका थिए । उनले आफै चलचित्र निर्देशन गर्ने सोँच समेत रहेको बताउँदै आएका थिए । यो चलचित्रका लागी उनि आफै स्कृप्टमा समेत बसिरहेका छन् ।
हमालको हातमा अहिले आधा दर्जन भन्दा धेरै चलचित्रका स्कृप्ट छन् । आगामी दशैको छेकोमा छायांकन गर्ने तयारीमा रहेको प्रेमगीत–३ मा हमालले आफ्नो साथमा रहेका सवै स्कृप्टलाई पाखा काम गर्लान् त ? त्यो भने हेर्न बाकी छ ।
Pradeep KhadkaRajesh Hamal